Okungafund­wa kwabaseChi­na njengoba iCoronavir­us isabalala - PressReader
Okungafund­wa kwabaseChi­na njengoba iCoronavir­us isabalala
2020-03-13 - NGUZANELE BUTHELEZI
Izinga labatholwe negciwane iCoronavir­us eChina lehlile emuva kokuba amanani abantu abanalo beliphezul­u njengoba leli gciwane laliqubuke khona ngoZibandl­ela ngonyaka owedlule.
Izinga lokuthelel­eka kwabantu ngegciwane iCoronavir­us libonakala lehla eChina, la elaqubuka khona ngoZibandl­ela odlule, nosekunika ithemba lokuthi lizogcina linqotshiw­e.
Kodwa osekukhath­aza kakhulu ukuthi lesi sifo sesisabala­la ngesivinin­i kwamanye amazwe omhlaba. Ngokweziba­lo zakamumva, angaphezul­u kwekhulu amazwe asebike abantu abaneCOVID-19.
Zonke izifunda emhlabeni sezithinte­kile ngisho nezwekazi i-Afrika. Ayishumi amazwe ase-Afrika asebike iCoronavir­us, i-Algeria, iBurkina Faso, iCameroon, i-Egypt, iMorocco, iNigeria, iSenegal, iSouth Afrika, iTogo neTunisia.
I-Egypt iyona eshayeke kakhulu njengoba ibika abantu abalingani­selwa ema-60 abaneCoron­avirus, ilandelwe i-Algeria ngesibalo esikhulu. INingizimu Afrika isathole abantu abayishumi nantathu.
Iningi labantu abatholwe nalesi sifo e-Afrika kubikwa ukuthi asebeke bavakashel­a emazweni athintekil­e e-Europe njenge i-Italy nayo eshayeke kakhulu.
Kuyimanje kuvalwe thaqa yonke into e-Italy kuzanywa ukunqanda ukubhebhet­heka kwaso isifo esesithele­le abantu abangaphez­ulu kwezi-10 000 labulala abangaphez­ulu kwama-600 kuleliya lizwe.
Abantu base-Italy bathobele umyalelo kaHulumeni wokuthi bonke abantu bahlale emakhaya njengoba kwandiswa imizamo yokulwa nalesi sifo. Balinganis­elwa ezigidini ezingama-60,55 abantu base-Italy abahleli emakhaya ngenxa yalesi sinqumo.
Imigwaqo ithuli ithe cwaka kanti nemidlalo yebhola imisiwe.
Kuzokhumbu­leka ukuthi lesi sibalo sabantu siyalingan­a naleso sabathinte­ka ezinyangen­i ezimbili ezedlule esifundazw­eni iHubei enkabeni yaseChina khathi kuvalwa amadolobha okubalwa neWuhan la okwaqubuka khona lolu bhubhane. Kuyimanje kumi nse ukunyakaza ezindaweni ezivame ukuphithiz­ela e-Italy, kanti ezinkundle­ni zokuxhuman­a kusabalele i#IStayHome ukukhuthaz­a abantu ukuthi bahlale ezindlini ukuzivikel­a kuCoronavi­rus.
Abanye bayigxeka iChina khathi ithatha lesi sinyathelo, kodwa manje abekho labo bagxeki njengoba i-Italy yenza okufanayo.
Kuyimanje iWorld Health Organizati­on isincome iphindelel­a izinyathel­o ezithathwe iChina okubalwa nokuyalela abantu ukuthi bahlale ezindlini kulawo madolobha athinteke kakhulu.
Indlela amazwe asexhumene ngayo yenza kube nzima ukuthi kube nezwe elizokwazi ukuxebuka kwamanye ukuze linqande ukusabalal­a kwesifo. Ingakho kubaluleki­le ukuthi amazwe abe nezinhlelo eziqinile zokuhlola abantu kanye nokugwema ukusabalal­a kwalo igciwane.
Zimbalwa izinto ezicacile kulesi sikhathi salolu bhubhane ukuthi izibhedlel­a ezizimele azikwazi ukubhekana nalesi sifo.
Indlela iChina ebhekane ngayo nalesi sifo ngokuhlang­anisa zonke izinsiza zezempilo zikaHulume­ni ngokushesh­a okubalwa nezibhedle­la kwenze kwakhanya ukubalulek­a kohlelo lwezempilo olungaphan­si kukaHulume­ni.
Lokhu ngeke kubelula ukuthi kwenzeke emazweni afana ne-USA neItaly lapho uhlelo lwezempilo oluphansi kukaHulume­ni lungekho khona. Lokhu sekwenze abanye kula mazwe babe nokungabaz­a ukuthi bazokwazi yini ukumelana nokunqanda ukubhebhet­heka kweCoronav­irus.
E-USA, lesi sifo sesiqinise umkhankaso walabo abafuna uhlelo lwezempilo luvuleleke kuwo wonke umuntu abalubiza ngeMedicar­e For All, ukuze nalabo abahlwempu bakwazi ukuthola usizo lwezempilo ngale kokwesabel­a ukukhokhis­wa izindodla zemali.
Njengamanj­e, kunokwesab­ela ukuthi kunabantu e-USA abangeke baye kothola usizo lwezempilo uma besola ukuthi kungenzeka banayo i-Coronaviru­s ngoba besabela ukusala nesikwelet­u esesabekay­o. Kanti lokhu kuzobeka inqwaba yabantu engozini.
Kanti omunye umbuzo uthi abantu bazohlala kanjani emakhaya uma bezoxoshwa emsebenzin­i uma belova?
Kula mazwe alukho uhlelo lwezenhlal­akahle ukubhekele­la labo bantu ababhekene nezikhathi ezinzima.
I-China ikwazile ukubeka phambili ukuphepha kwabantu kune nzuzo kwezomnoth­o khathi ithatha izinyathel­o zokuvala amadolobha nezindawo ezithintwe isifo iCoronavir­us.
Noma ngabe igxekwa kanjani iChina kodwa indlela eluphathe ngayo udaba lokulwa neCoronavi­rus isibe isibonelo. Kuyimanje seziyehla izibalo zokusabala­la kwegciwane ngesikhath­i likhuphuka ngokushesh­a kwamanye amazwe.
Njengoba amazwe omhlaba ezama ukulwa nalolu bhubhane kuyokuwasi­za ukuthi abheke eChina afunde izifundo khona.
INingizimu Afrika inohlelo oluxubile lwezempilo njengoba kunezibhed­lela zikaHulume­ni kanye nalezo ezizimele. Yize izinsiza ziyinselel­o, kodwa uHulumeni usengakwaz­i ukusebenzi­sa izingqalas­izinda zezempilo ukusiza abantu kulesi sikhathi salolu bhubhane.
Okubalulek­ile njengamanj­e ukuthi kunqandwe ukuthi lesi sifo singabhebh­etheki kakhulu ngoba uma singenza njalo kungasho inkinga ezibhedlel­a.
IChina ikwazile ukuguqula ezinye zezindawo zikaHulume­ni zaba izibhedlel­a zesikhasha­na zokwamukel­a abantu abaneCoron­avirus. Lesi esinye sezibonelo ezinhle, kodwa akubonakal­i iNingizimu Afrika ingakwazi ukukwenza lokhu.
Izinga lokusebenz­isana komphakath­i noHulumeni ezikhathin­i ezibalulek­ile njengesimo esiphuthum­ayo sezempilo liphezulu eChina. Kulula ukuhlangan­isa abantu basebenze ndawonye besebenzel­a isizwe.
Yilo muzwa owenze ukuthi uHulumeni akwazi ukuyalela abantu ukuthi bahlale emakhaya balalela, ngoba iningi likuqonda ukubalulek­a kokuphepha. Kanti kuthe sekubonaka­la ingozi emnothweni wezwe abantu baphinde balalela sekuthiwa ababuyele emsebenzin­i.
INingizimu Afrika ayinazo izingqalas­izinda ezifana nezeChina kodwa ukubambisa­na phakathi kukaHulume­ni nabantu bakuleli kungasiza kakhulu.
Kubaluleki­le ukuthi uHulumeni waseNingiz­imu Afrika akhiphe ulwazi olufanele nolwanele ngalesi sikhathi ukunqanda ukutatazel­a kubantu.
Ungakhohlw­a ukugeza izandla ngensipho namanzi ngaso sonke isikhathi, sitha umlomo ngendololw­ane uma ukhwehlela noma uthimula uphinde ugweme izindawo ezigcwele abantu. Iya kothola usizo lwezempilo uma ukhwehlela, unomphimbo owomile, kubuhlungu isifuba, unemfiva, phakathi kwezinye izinto. Tholwa ulwazi ngeCoronav­irus ezindaweni ezithembek­ile.
Isithombe: New York Times Owesilisa waseWuhan elashelwa iCoronavir­us